ကတ်ထူပြားပန်းစည်း၊ အသေးစိတ်ရှိရန်စုံလင်သည် လက်မှုပညာများဖွင့်ထားသည်
ဂျဲနီရေတွင်း | | ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း, လက်မှုပညာ, ကတ်ထူပြားလက်မှုပညာ, စက္ကူလက်မှုပညာ, ကလေးများအတွက်လက်မှုပညာများ, ပြန်လည်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ! ဒီနေ့လက်မှုပညာမှာငါတို့တွေ့မယ် ကတ်ထူပြားထဲကဒီပန်းစည်းကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲမရ။ ၎င်းသည်လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးရန်ပြီးပြည့်စုံသောလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သင်ပန်းစည်းနောက်ကျောတွင်စာတစ်စောင်ထားနိုင်သည်။ လက်ဆောင်၊ စာအုပ်၊ ဓာတ်ပုံဘောင်စသည်တို့ကိုအလှဆင်ရန်လည်းသုံးနိုင်သည်။
အရောင်မျိုးစုံကဒ်များ။ ပန်းစည်း၏ပန်းအိုးအတွက်အရောင်၊ ပန်းပင်များအတွက်အခြားအရောင်နှင့်ပန်းပွင့်ပွင့်ကိုပြုလုပ်ရန်အခြားတစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။
ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမယ် ငါတို့လိုအပ်မယ့်မတူညီတဲ့ကတ်ထူပြားအပိုင်းအစတွေကိုဖြတ်လိုက်ပါမရ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပန်းပွင့်ပင်စည်ဖြစ်အောင်တုတ်သုံးချောင်းဖြတ်မယ်။ ပန်းပွင့်များ၏အလယ်ဗဟိုတွင်စက်ဝိုင်းပုံသဏ္andန်များနှင့်ပန်းသုံးပွင့်ပါ ၀ င်သည်။ အလှအပကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ပန်းများနှင့်စက်ဝိုင်းများအတွက်အရောင်နှစ်ခု သုံး၍ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုပေါင်းစပ်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့ပန်းစည်းရဲ့ပန်းအိုးအဖြစ်သုံးမယ့်အပိုင်းကိုငါတို့ဖြတ်လိုက်တယ်။
ပြီးအောင်လုပ်ရအောင် ပန်းစည်းကိုစုစည်းပါ အတွင်းမှပန်းများကိုမိတ်ဆက်ရန်
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ အရွက်ကိုထည့်ခြင်း (သို့) သစ်ရွက်တစ်ခုထည့်ခြင်းဖြင့်ပြီးမြောက်စေပါ cardstock သည်ပန်းများသို့
နှင့်အဆင်သင့်! ပန်းတစ်ပွင့်ကပြားတဲ့အတွက်အလှဆင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကတ်လုပ်ဖို့အလှဆင်ဖို့ပြီးပြည့်စုံတယ်။ eva ရာဘာဖြင့်လည်းဤလက်ရာကိုသင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - လက်မှုပညာ » လက်မှုပညာ » ကတ်ထူပြားပန်းစည်း၊ အသေးစိတ်ရှိရန်စုံလင်သည်